फोन र ल्यापटपमा अत्यधिक समय बिताउनुहुन्छ ? दृष्टि सुधार गर्न यी तरिका अपनाउनुहोस्
मुख्य पृष्ठस्वास्थ्यफोन र ल्यापटपमा अत्यधिक समय बिताउनुहुन्छ ? दृष्टि सुधार गर्न यी तरिका अपनाउनुहोस्
विराटनगर/पहिलेको तुलनामा लकडाउनका कारण स्क्रिनमा बिताउने समय धेरै गुणा बढेको छ ।
कामको बोझ र समय बिताउनका लागि सबैले धेरैजसो समय स्क्रिनमा हेरिरहेका हुन्छन् । फोन र ल्यापटप स्क्रिन हेरेर धेरै बेर समय बिताइन्छ भने छिट्टै आँखाको रोग वा आँखामा हुने थकानबाट पीडित भइन्छ । स्मार्टफोनबाट उत्सर्जित हानिकारक निलो बत्तीले अन्धापनलाई चाँडो निम्त्याउन सक्छ । तल दिएका पाँच सजिलो आँखा अभ्यासले दृष्टिलाई सुधार गर्न मद्दत पुग्छ ।
पाल्मिङ : एक सजिलो व्यायाम जसले आँखाको तनावलाई कम गरी आँखाको दृष्टिलाई बढाउँछ । यो व्यायामका लागि गर्मी उत्पादन गर्न दुबै हत्केलालाई माड्नुपर्छ । त्यसपछि बिस्तारै हातलाई आँखामा केही सेकेन्डका लागि राख्नुपर्छ । यस व्यायामलाई दिनमा पाँचदेखि सात पटक दोहो¥याउनु पर्ने हुन्छ ।
आँखा धुमाउने : आँखालाई रोल गर्नु वा धुमाउनु अर्को सजिलो व्यायाम हो जुन कुनै पनि समयमा गर्न सकिन्छ । केही मिनेटको लागि आँखालाई घडीको दिशामा घुमाउन सकिन्छ । केही समय विश्रामपछि घडीको उल्टो दिशामा आँखालाई घुमाउनु होस् । यस व्यायामलाई पाँच पटक दोहोर्‍याउनुहोस् ।
पुनः केन्द्रित गर्ने (रिफोकसिङ) : ल्यापटपमा निरन्तर काम गरिरहनु पर्दा रिफोकसिङ व्यायाम गर्नुपर्छ । केही समय काम गरेपछि स्क्रिनबाट आँखालाई टाढा राखी र केही अन्य वस्तुमा ध्यान दिनुहोस् । त्यसपछि हातमा हेरी टाढाको वस्तुमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् । यस व्यायामलाई पाँच पटक दोहोर्‍याउनुहोस् ।
आँखा झिम्काइरहने : आँखा झिम्काउनु स्वाभाविक रूपमा भइरहन्छ । तर, झिम्क्याउने व्यायामका लागि अगाडि खाली पर्खाल हुनुपर्छ । दुई सेकेन्डका लागि आँखा बन्द गरेर लगातार पाँच सेकेन्डका लागि द्रुत गतिमा आँखालाई झिम्काउनुहोस् । एकपल्ट गर्दा पाँचदेखि सात पटक दोहोर्‍याउनुहोस् ।
२०–२०–२० नियम : कम्प्युटरमा काम गर्दा वा फोनमा लामो समय ध्यान दिँदा, प्रत्येक २० मिनेटमा, २० फिट टाढा रहेको बस्तुलाई २० सेकेन्डका लागि हेर्नुहोस् ।
सही खानाले पनि आँखाको स्वास्थमा ठूलो भिन्नता पार्न सक्छ । साग, अण्डा, गुलियो आलु, फर्सी र गाँजरलगायतका एन्टिअक्सिडेन्टयुक्त आहारलाई समावेश गर्नुहोस् । पहेँलो र हरियो तरकारीले अन्धोपन हुनबाट जोगाउन सक्छ । खानामा माछा वा माछाको तेल क्याप्सुल समावेश गरेमा मोतियाबिन्दुको समस्यालाई हुनबाट रोक्न सक्छ ।